Nhau - Shopify iri Kuchinja iyo eCommerce Game
Shopify iri Kuchinja eCommerce Game
Mutambo unochinja munyika yeCommerce, hapana imwe kunze kweiyo Shopify chikuva.
Chaizvoizvo, iyo yekutenga app inoshongedza iyo yese nhare yekutenga ruzivo, iko, kuwanikwa, kubhadhara, uye kuendesa mune imwechete application. Vatengi vanopinda paapp neemail, vachitevera akasiyana Shopify-magetsi mabara ari kuzadza akasarudzika enhau chikafu chezvinhu zvinokurudzirwa zvigadzirwa.
Ivo vanoita sarudzo yezvigadzirwa, enderera kutarisa-uye chengetedza kuendesa. Chokwadi, Shopify ndiyo yakanakisa nharembozha yekutenga parizvino, uye Shopify webhu kusimudzira masevhisi anoramba achikwira.
Iyo Yakanyanya Pamhepo Chitoro Muvaki
Shopify inoonekwa seyakanakisa eCommerce chikuva mumusika wanhasi.
Yakagadzirirwa kubatsira vanhu kuvaka zvinotyisa, zvitoro zvepamhepo nemazana ayo akavakirwa-mukati uye matani eemaapplication, Shopify ndiyo inonyanya kutsvakwa yekutenga chikuva mazuva ano. Zvakananga kutengesa zvigadzirwa nemasevhisi pawebhu, pamasocial media nemisika dzakasiyana siyana zviri nyore neShopify.
Paunotanga bhizinesi reCommerce, pane zvinhu zvakawanda zvaunofanirwa kunetseka nazvo, kusanganisira kuwana icho chigadzirwa-musika chakakodzera, zvigadzirwa zvigadzirwa, manejimendi manejimendi, uye kugadzira zano rekushambadzira.
Kana usati wavandudza ruzivo iwe pachako, funga kurega nyanzvi, senge Shopify yekuvandudza agency inobata divi rekuvandudza zvinhu. Kuhaya mugadziri kunokutendera Iwe kushandisa yakawanda nguva mukugadzira zvimwe zvebhizinesi.
Kunze-kwe-kwe-bhokisi, chikuva ndicho chakasimba kupfuura eCommerce webhusaiti anovaka. Iine zvese zvaungangoda zvekumisikidza uye kugadzirisa rako bhizinesi. Zvitoro zvinowanda uye zvidhinha zviri kufamba pamhepo, nepo mukurumbira eCommerce zvigadzirwa zviri kuvhura zvitoro-uye-zvitoro zvitoro.
MuCommerce nhasi, hapana chakafanana neyaive makore gumi kumashure. Wese munhu ane bhizinesi muzana ramakumi maviri nemasere nenzira yechisikigo anoziva nezve Shopify. Nekudaro, zvisinei nekupararira kwayo, vashoma vanonyatsonzwisisa kudzoka kwakati kwivhu kwainopa.
Vakatanga puratifomu, nekuda kwekudikanwa vakaigadzira mushure mekuona kuti izvo zviripo eCommerce sarudzo zvaive zvisina kukwana kutengesa. Vakauya neShopify neyakavhurika-sosi sisitimu. Kubva ipapo yakawedzera kugona kwayo kusanganisira maficha senge mushandisi kubatikana, kushambadzira uye zvimwe zvakawanda.
Shopify, chii chaizvo?
MuCommerce uye kushambadzira hurukuro nhasi, Shopify ndeimwe yemhinduro dzinowanzo kuunzwa.
Wese munhu anobvuma nemusoro kubvumirana, asi vashoma chete ndivo vanonzwisisa mashandiro epuratifomu. Zvichitaurwa zviri nyore, Shopify inzvimbo yezvigadzirwa zvepamhepo yekutengesa uye eCommerce transaction.
Ipuratifomu inogonesa avo vane bhajeti shoma kupinda muCommerce nharaunda, inobvumidza avo vane mabhajeti akakura kuti vakure mhando yavo, uye pamwe zvinonyanya kukosha, bvumidza zvitoro zvepanyama kuvharidzira mukaha pakati pebhizimusi-remunhu nekutengesa pamhepo, nekuda kweShopify's POS yekudyidzana.
Kune akawanda emabhizinesi akasiyana siyana, Shopify zvinhu zvakawanda, nekudaro zvave kupararira pakati pekubudirira kushambadzira pamhepo uye eCommerce mumakore gumi apfuura.
Yayo suite yezvigadzirwa uye masevhisi anogona kuyerwa kune chero saizi yebhizinesi. Kutengesa kweDhijitari, kubvunza, kutengesa kwepanyama, matikiti, zvidzidzo, zvekurenda, uye zvimwe zvakawanda-Shopify inofanirwa kuve shopu-yekumira kune ese eCommerce zvinhu.
Kune avo vanoshuvira kuve vezvemabhizimusi pamhepo, izvi zvinonyanya kufadza.
Nei uchivaka neShopify?
Iko kudiwa uye kudiwa kweiyo Shopify budiriro kwakakura mukukwakuka nemuganhu. Ipuratifomu yakagara iri sarudzo yakasarudzika yevatengesi vanoenda kuve nyore uye zvakapfuma maficha mukugadzirisa kwavo eCommerce zvitoro. Shopify inouya nezvinotevera mabhenefiti:
Iyo chikuva ine huwandu hwakawanda hwazvino uye hunyanzvi matemplate ekuvaka zvakanakisa zvinonakidza online zvitoro. Kunyangwe ichiuya nemisoro isina chinhu, kushanda neShopify theme dhizaini dhizaini uye vagadziri kunounza rakapfuma mushandisi ruzivo uye mushandisi interface kune vashanyi.
2. Kushandiswa kuri nyore.
Kusiyana nedzimwe eCommerce mhinduro, Shopify haina kupokana uye zviri nyore kumisikidza uye mushandisi kune vese vanogadzira uye vasiri-vagadziri. Iyo inopa software uye kuitisa kuvhura webhusaiti. Uyezve, iyo admin interface inoshandisa-inoshamwaridzika uye inonzwisisika.
3. Yakavimbika uye yakachengeteka.
Kuvaka nekutarisira chitoro chepamhepo chinochengetedza ruzivo rwevashandisi, senge ruzivo rwemunhu uye ruzivo rwekadhi rechikwereti, semusimabhizimusi iwe waungade kuti rive rakavimbika uye rakachengeteka. Shopify inogumbatira izvi kuburikidza nekugara uchigadzirisa uye kukwidziridzwa.
4. Kubatanidzwa kwekushandisa.
Iyo yekutenga chikuva zvakare inoita kuti iwe ushandise yako online shopu zviri nyore, pamwe nekubatanidza maapplication, zvichigonesa kuwedzera zvimwe zvakapfuma maficha uye mashandiro ekuwedzera iyo.
5. Kurumidza Kumhanya.
Imwe bhenefiti kune Shopify ndeyekumhanya kwayo nekukurumidza nekuda kweyakagadziridzwa Hardware uye software. Nguva yekuregedza ine chakakosha mhedzisiro, nekuti vatengi vanowanzo siya saiti iyo inotora anopfuura masekondi mana kurodha. Nekudaro, zvakakosha kuti uende kunotsvaga mhinduro mhinduro.
6. Zvishandiso zvakasarudzika zvekushambadzira.
Shopify inopa zvimwe zvekushambadzira pamwe nekukura bhizinesi. Iyo yekutanga vhezheni inopa akati wandei akanaka analytics zvishandiso uye SEO maficha. Zvakare, iyo inopa maficha akadai sekudzikisira makuponi, zvitoro manhamba, email kushambadzira, makadhi echipo, uye nezvimwe zvakawanda.
Nei Platform yakaita seShopify iri ramangwana reCommerce
Iyo yepasi rose eCommerce yekutengesa inofungidzirwa kuti ingangosvika madhora mashanu emadhora mukati megore rino kana rinotevera. Iyo nhamba inomiririra kukura kwe265 muzana kana ichienzaniswa na2014. Kukura kwacho kunogona kuverengerwa zvakanyanya kune mikana mitsva yemusika wepasi rose.
Gore rinotevera, vangangoita makumi maviri muzana eCommerce yekutengesa yaizofungidzirwa kune vatengi vekunze. Izvozvowo zvinoenda kune yepamba mutengi base sezvo internet ichityora tsika miganho uye matunhu mapoka. Vatengi izvozvi vanogona kusangana nemabhizimisi ekunze zvisati zvamboitika, nekuda kweCommerce.
Bhizinesi riri kuwedzera, uye rinoda simba rakasimba rezvigadzirwa kutsigira kukura kusingaenzanisike. Parizvino, Shopify uye Shopify kuvandudzwa kweapps ndiyo imbwa hombe yemakwikwi munyika yeCommerce, asi kune vamwewo. Kunyange zvakadaro, chinoita kuti chionekwe uye chinoita kuti chinyatso kuoneka pakati pevamwe ndeye kuita kwakawanda.
Yakabatana eCommerce chiitiko zvinoenderana nekubudirira kwezvinhu zvakasiyana. Chero zvauri kutengesa, kungave kubva kuchitoro chako chemuviri kana yako yepasi, eCommerce muyero wakaenzana. Homwe dzakadzika dzinoenzana otomatiki kubhizimusi rinogara dzisisipo mazuva ano.
Mazuva ano, maratidziro echiratidzo, zano renyanzvi, uye kunyange netsitsi bhizinesi maitiro anogona kutungamira kudzokorora bhizinesi. Kiredhiti kumapuratifomu akadai seShopify, chipingamupinyi chekupinda muCommerce nyika hachina kumbobvira chakaderera. Chero ani zvake ane hushingi hwekuita basa, zano rakanaka, uye nerombo rakanaka anogona kubudirira pamusika pamhepo.
Mikana mikuru inotyaira Shopify's future Growth
Kukura Kwenyika Dzese
Kunyangwe chikuva chekutenga chiine mashandiro munyika zana nemakumi manomwe neshanu pasirese, zvinogona kushamisika kune vanoita mari kuziva kuti ruzhinji rwekutengesa kwakagadzirwa kuri muNorth America. Iyo kambani yanga ichishanda nesimba mukuwedzera kusvika kwayo kwepasirese uye mashandiro, pamwe nekupa maturusi enzvimbo kune epasi rese mutengesi.
Nhasi, Shopify inowanikwa mumitauro makumi maviri dzakasiyana uye iyo Shopify Kubhadhara yakawedzera kusvika kunyika gumi neshanu. Pakupera kwegore rapfuura, vatengesi vazhinji munyika vakatanga mabhizinesi avo paShopify.
Shopify Fulfillment Network yakangopfuurwa gore rapfuura, asi zvese zvinoratidza kuti ramangwana renetiweki rakajeka. Mazana ezviuru zvevatengesi vakaratidza chishuwo chavo kuve chikamu chechirongwa chekuwana. Shopify kubvira ipapo yatora nzira yakayerwa, ichiwedzera chete 'gumi nevashambadzi' asi ichichengeta kutarisisa pahunhu hwekuita pamusoro pechiyero pakutanga.
Gore rino raizove 'rinorema kudyara' kweShopify, sezvo vazhinji uye vanamuzvinabhizimusi vari kufunga kudyara muShopify mhinduro.
Chirwere cheCoronavirus, pachiri kumisa mabhizinesi mazhinji uye kukanganisa mamirioni evashandi pasi rese, vanhu vaona mukana wekuita bhizinesi online, sekurambidzwa uye kudzora pamuganhu kuri kuitwa. Nekuda kwevanhu kuti vagare mumba, kutenga pamhepo kwakawedzera.